Ngaba Ndinokuzukisa Ngaphezu Kweyodwa UThixo okanye UThixokazikazi?
Njengoko uqala ukuhlola iPagan ngokucace ngakumbi, unokufumanisa ukuba udityaniswa omnye uthixo okanye unkulunkulukazi. Xa usuqulunqe uxhulumano oluqinileyo, usenokukhetha ukwenza isenzo sokuzinikela kuye - kwaye kukuhle! Kodwa kwenzeka ntoni phantsi kwendlela, ukuba kwaye nini xa ufumana udibanisa noThixo ohlukile? Ngaba unokuzihlonela zombini, okanye ngandlela-thile ungayihloneli omnye wabo? Ngaba unokutshintsha ukubandakanyeka kwakho, okanye kufuneka uzinikezele kunkulunkulu omnye?
Iindaba ezilungileyo kukuba ngelixa le nto ingumngcipheko, yinto enye enokuba neempendulo ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwintlambo yakho yePaganism. Kwezinye izithethe zamaPagane, abantu bazinikezela kunkulunkulu omnye okanye unkulunkulukazi weso sithethe sithethe. Kwezinye iimeko, banokuzinikezela kubini babantu.
Ngamanye amaxesha, abantu banokuziva bexhamle kunye noothixo abavela kwiintetho ezahlukeneyo. Kukho ininzi yamalungu omphakathi wasePagan athi le nto ayikho, akukho nyaniso kukuba oko kwenzeka. UJohn Halstead e-Patheos ubhala esithi, "Lo myalelo udlalwa ngabaxholi bezintloni, kodwa zenziwa ngabanye abancinci-bezintlanganisi.) Ngokuqhelekileyo bavulekile ngokunyaniseka kwabo kwabo baxuba i-pantheon. Kubonakala njengendlela yokungahlanjululwa okanye ukungazi Abanye babona njengento yokungahloneli. "
Nangona kunjalo, nguwe kuphela onokukwazi ukuba i-gnosis yakho yintoni. Kwaye oko kuthetha ukuba ukuba usebenza kunye noothixo abahlukeneyo kwii-pantheon ezahlukeneyo, baya kukuxelela ukuba kuya kusebenza okanye cha.
U-Halstead ukhankanya ukuba ukuba kwakungokoyilo elibi kangaka, "simele sibone ezinye iziphumo ezimbi ngokugqithiseleyo."
Umgca wenyani kukuba nguwe kuphela oya kukwazi ukuba kusebenza kuwe-kwaye ukuba oothixo abafuni ukuba udibanise nabanye ubuThixo, baya kwenza ukuba kucace.
Kukho ininzi yamaPagan kunye namaWiccans anamhlanje abachaza ngokwawo njenge-eclectic, oko kuthetha ukuba banokuhlonela uthixo wenkcubeko enye ngaphandle komthikazi wesinye. Kwezinye iimeko, sinokukhetha ukucela uncedo ngoncedo lomlingo okanye ukuxazulula ingxaki .
Ubuntu bomoya buhlala buba bukhuni, ngoxa sinobuqaqawuli bunye sinokuthi sibizwe ngomnye. Ngaba oku kuthetha ukuba owokuqala akasenayo impembelelo? Akunjalo-ithetha nje ezinye izinto ezivela kuThixo zifumana umdla.
Ukuba uvakalelwa ngokwenene kuthiwa nguThixo wesibini, kufuneka uqikelele ukuhlola izinto ezininzi. Buza unkulunkulukazi wokuqala ukuba ngaba uya kukhubekisa ukuba uyamhlonela omnye umntu kunye naye. Emva koko, oothixo bahluke ngokucacileyo izinto, ngoko ukuhlonipha unkulunkulukazi wesibini akuthethi ukuba ziphi na iinzwane eziqhutyayo.
Khangela ngale ndlela: unomhlobo ongaphezu komnye ebomini bakho, kunene? Unokuba nobuhlobo obusondeleyo nothando nomntu oyedwa, kodwa oko akuthethi ukuba awuvumelekanga ukuba wenze abahlobo abatsha obaluleke kakhulu kuwe. Enyanisweni, xa nje abahlobo bakho behamba kunye, akufanele kube nzima ukuxhoma kunye nabo bobabini ngexesha elinye.
Ngokuqinisekileyo, kuya kubakho iziganeko apho ujongene nenkampani ngaphandle komnye, kodwa kunjalo, unamagama alinganayo kunye nobabini. Nangona oothixo bahlala befuna ixesha lethu namandla ngamandla, zonke izinto zilingana, unako ukuhlonipha ngaphezu kweyodwa.
Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba uphethwe nguThixo , kungekhona kanye kuphela, kodwa kabini, uyicinge njengesipho. Ngaphandle kokuba unkulunkulu unenkcaso ekukholeni okanye kunqulo kwenye, yonke into kufanele ifanele. Phatha zombini ngentlonipho, kwaye ubonise nganye inhlonipho abafanelwe ngayo.
Quan O'Brien Quotes kunye namaJokes
I-Texas Revolution: Imfazwe yaseAlamo
Iingcebiso ezi-7 zePainting ezithandekayo izithunzi
Indlela Yokunquma Iileta Kwi-Shaft Golf
Indlela yokuvavanya iDrayivu yeCar Used
Iimpawu ezidume kakhulu kwi-MBA